ခင်ဖောင်ရွာ မှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါဧ။်: အပြစ်တရား
Filed under: အပြစ်တရား
အပြစ်၏အဖိုးအခအား အဘယ်ကဲ့သို့ပေးဆပ်ရမည်နည်း ?
အပြစ်တရား၏ အဖိုးအခမှာ သေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အပြစ်သားဖြစ်သော လူသားတိုင်း တစ်နေ့ ထိုအဖိုးအခကိုပေးဆပ်ရပါလိမ့်မည်။
အာဒံအားဘုရားသခင်က ထိုအပင်၏ အသီးကိုမစားရ စားသောနေ့တွင် ဧကန်အမှန်သေရမည်ဟုဆိုပြီး အဘယ့်ကြောင့် ချက်ခြင်း သေမသွားရပါ သနည်း?
သေခြင်းဆိုသည့် (Death) မှာ (Depart) ဆိုသောစကားမှလာပြီး ထွက်ခွါသွားသည် အဆက်ပြတ်သည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ သေခြင်း သုံးမျိုးရှိပါသည်။ ဘုရားနှင့်လူ အဆက်ပြတ်ခြင်း၊ ခန္ဓာနှင့်ဝိညာဉ်အဆက်ပြတ်ခြင်း၊ ဘုရားနှင့် ထာဝရအဆက်ပြတ်ခြင်း ဟူ၍လည်း အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။
အပြစ်အမျိုးအစား ဘယ်နှစ်မျိုးရှိပါသနည်း ?
အပြစ်အမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ မွေးရာပါ ဗီဇအပြစ် (Sin) နှင့် လူတို့လွန်ကျူး သောဒုစရိုက်အပြစ် (Sins) တို့ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအပြစ်၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော ဗီဇအပြစ်တရား အကြောင်းကို အခြားမည်သည့်ကျမ်းတွင်မှ အလေးပေး ဖေါ်ပြထားခြင်း မရှိပါ။
ဘာတွေလုပ်မိလျင် အပြစ်ဖြစ်ပါသနည်း ?
မကောင်းတာကိုလုပ်မှ အပြစ်မဟုတ်ပါ။ ကောင်းမှန်းသိပါလျက် နှင့် မလုပ်မိလျှင်လည်းအပြစ်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ထက် သာမက မသိဘဲ လုပ်မိပါကလည်း ရာနှုန်းပြည့်အပြစ်ဖြစ်ပါသည်။ မသိ၍လုပ်မိသည်ကို ဥပဒေက ခွင့်လွှတ်မည်မဟုတ်ဟူ သော လောက ဥပဒေရှိသည့်အတိုင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိသေပြီးမှ တမလွန်၌ တရားစီရင်မည့်အရှင်ရှေ့သို့ရောက်ပြီး ကျွန်တော်မသိလို့ပါဟု အကြောင်းပြ၍ မရတော့ပါ။ လူသားတိုင်းကို တမလွန်၌ မိမိအား တရားစီရင်မည့် ဘုရားအကြောင်း ကိုသိမြင်နိုင်သော အသိဥာဏ်ပညာနှင့် ယုံလောက်သော သက်သေအများလည်း ဘုရားကလူတို့အား ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထိုဘုရားကို သင်မသိပါ ထိုဘုရားကိုသင် မယုံကြည်ပါ၊ ထို့ကြောင့်တမလွန်တွင် စီရင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု မထင်လိုက် ပါနှင့်။ တရားရုံးတွင် တရားခံက တရားသူကြီးကိုမသိ၍၊ ဥပဒေကိုနားမလည်၍ တရားသူကြီး၏ အပြစ်စီရင်ခြင်းကို လက်မခံနိုင်ပါဟု ချေပပြောဆိုပိုင်ခွင့်မရှိပါ။
လူသားတိုင်းသည် ဘုရားရှေ့တွင်အပြစ်နည်းသည်နှင့် များသည်သာ ကွာခြားပြီးအပြစ်သားများသာ ဖြစ်ကြပါသည်။ ဥပမာ သရက်ပင်နှစ်ပင်တွင် တစ်ပင်က အသီးပေါင်းမြောက်များစွာသီးပြီး ကျန်တစ်ပင်က ငါးလုံးသာသီးပါသည်။ သို့သော် သရက်သီးငါးလုံးသာသီးသည့်အတွက် ထိုအပင်ကို သရက်ပင်မဟုတ်ဟု ပြောလို့ မရပါ။ ကာယကံနှင့်မှမဟုတ်ပါဘဲ ဝစီကံ၊ မနောကံတို့ နှင့် ပြစ်မှားမိပါကလည်း အပြစ်ဖြစ်ပါသည်။
မဟုတ်ပါ။ လူသည်အပြစ်သားဖြစ်၍ အပြစ်ကိုသင်ပေး စရာမလိုဘဲ လုပ်တတ် ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အပြစ်သား ဖြစ် ခြင်းကပထမ အပြစ် လုပ် ခြင်းက ဒုတိယဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ ရေကူးတတ်၍ ဘဲဖြစ် ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘဲဖြစ်၍ ရေကူး တတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများအား အဘယ်ကဲ့သို့လိမ်ရမည်ဆိုသည်ကို မည်သူမျှသင်ပေးစရာမလိုပါဘဲ လိမ်တတ်ကြပါသည်။ ငယ်သောအရွယ်မှစ၍ မိဘ ဆရာသမား တို့ကို ကိုယ်စိတ်နှလုံးသုံးပါးတို့ဖြင့် ပြစ်မှားတတ်ကြပါသည်။ နောက်ဆုံး လူသည် မွေးကတည်းက ဘာမျှမလုပ်ပါဘဲနှင့် ငုတ်တုပ်ထိုင်နေပါကလည်း အပြစ်သား သာလျှင်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by ခင်ဖောင်( ခေါ်) ဟုတ်(လ်) ခေါ် at 4:29 PM